Unoda kudzikisira kubva kuIOS 11 beta kuenda kuIOS 10? Tinokuratidza maitiro ekuzviita | IPhone nhau
Chero bedzi Apple ichiramba ichisaina shanduro dzekare dzeIOS 11, iyo vhezheni yekudzikisa inogona kuitwa zviri nyore uye zvakapusa, kuti iwe ugone kuyedza iyi vhezheni itsva iOS 11 yeruzhinji beta ichangoburitswa neveCupertino vakomana uyezve Dzokera kuIOS 10.3.2 uine mashoma mashoma matanho.
Dzese beta shanduro, dzingave dzekuvandudza kana dzeveruzhinji, dzinokutendera iwe kuti udzokere kune zvekare shanduro uye mune iyi kesi kana iwe waona iwo mabhugi zvakanyanya kana kuti watoneta nekuve mune beta vhezheni, unogona nyore kudzokera kuIOS 10.3. .x kuvonga kuTunes, Hongu zvirokwazvo, inoda backup pamberi pekumisikidzwa kwe beta.
Kana tangove yedu iPhone kana iPad mune yeruzhinji beta vhezheni yeIOS 11 zviri nyore kudzoka nekutenda kuTunes. Chinhu chekutanga chatinofanira kutarisa ndechekuti isu tine iyo yazvino vhezheni ye iTunes yakaiswa pane yedu Mac kana PC uye shandisa iyo yekutanga iPhone kana iPad tambo yeichi chiitiko. Nezvinhu zviviri izvi zvakajeka tinotanga maitiro.
Isu tinobatanidza iyo iPhone kana iPad kune Mac uye takabata pasi iyo mabhatani "kutanga" uye "simba" (iPhone 7 / iPhone 7 Plus ine bhatani remagetsi + vhoriyamu pasi) isu tinotarisira kuti logo yeapuro inoonekwa uye ichiisiya ichimanikidzwa kudzamara tave kushinga Kudzorera maitiroinova iTunes icon uye netambo.
Iye zvino tinofanirwa kudzvanya paMac / PC mune iyo sarudzo yekudzosera iPhone kana iPad uye kubvisa, Tsvaga yangu iPhone dai taive nayo ichishanda kuburikidza ne Apple ID uye password. Kana iko kudzoreredza kwaitwa, zvinotibvunza isu kana tichida kudzorera yekare backup kana kumisikidza iyo iPhone / iPad seyatsva, isu tinosarudza iyo backup yatakataura pakutanga, gadzira uende.
Chokwadi ndechekuti zviri nyore kwazvo kudzokera uye kusiya iyo iPhone kana iPad mune yazvino vhezheni zvakare, isu tinongofanirwa kungwarira pese patinoisa beta kuti tigadzire yapfuura kuitira kana tichifanira kudzoka kuti tisarase iyo data re idevice. Chero zvazvingaitika, mumamiriro ezvinhu akaipisisa zvingave chaizvo izvo isu taizorasikirwa rese data uye zvaizove zvakafanira kumisikidza se iPhone nyowani kana iPad.
Vamwe vashandisi vangave vaine matambudziko kurodha vhezheni yeiyo iPhone uye izvi zvinogadziriswa ne iOS 10.3.3 beta kurodha pasi. Mune ino kesi izvo zvatinofanirwa kuita ndeizvi isa yedu iPhone muKudzorera Mode uye tanga waisa iyo beta yeIOS 10.3.3 kuti isu tinokwanisa dhawunirodha kubva pane iyi link, ipapo tinogona kudhawunirodha kune iyo vhezheni yeIOS 10.3.2 kurodha pasiwedhi yedu pane iyo iPhone.
Kuisa iyo IPSW faira umo iOS 10.3.3 beta ichaponeswa, chatinofanira kuita neRedownload mode uye yakabatana neMac, tinya iyo ⌥ (Sarudzo) kana Shift kiyi mune yekushandisa PC uye mu Dzosera kubva kuTunes. Bhokisi rebhokisi rekuisa iyo yakadzingwa vhezheni muIPSW ichaonekwa. Isu takasarudza beta iOS 10.3.3 ndokuisa pane iyo iPhone. Ipapo tinogona kuita maitiro ari pamusoro kuisa iOS 10.3.2.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Unoda kudzikisira kubva kuIOS 11 beta kuenda kuIOS 10? Tinokuratidza maitiro ekuzviita
Yakandishandira zvakakwana. Ndatenda!